ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »6နွေရာသီနေ့စွဲအကြံဉာဏ်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 23 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဒီနွေရာသီမှာ sizzle Make – ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းနှင့်အတူ6ယခုရာသီအဘို့အရက်စွဲစိတ်ကူးများ!
အဲဒီမှာအထဲက Get နှင့်သင်တို့မြင်ရဖို့အဓိပ္ပာယ်ခဲ့ကြရတယ်သူအပေါင်းသောအရပ်တို့ကိုကြည့်ရှု. သုတေသနလုပ်ငန်းတောင်တက်သင့်ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်မသာသက်သေပြခဲ့သည်, ဒါကြောင့်လည်းတကယ်သင်၏ရက်စွဲကိုသိရန်ရရန်အချိန်နှင့်နေရာခွင့်ပြု. ပို. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရပျ, သငျသညျရှိသည်လိမ့်မယ်နည်းလေအဆင်မပြေငြိမ်ဝပ်စွာနေ – အမြဲ ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်တစ်ခုခုရှိပါလိမ့်မယ်အဖြစ်!
2. အတူတူအားကစားရုံ hit
သင်တစ်ဦးကြံ့ခိုင်ရေးဇှတျထိုးသမားင့်ထွက်စတင်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်, အားကစားရုံကိုသွားမယ့်အားကစားရုံ-ရဲ့ buddy နဲ့အမြဲပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်ပါသည်. သင်နှင့်သင့်နေ့စွဲရဲ့အသီးအသီးအခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာအဖြစ်လုပျဆောငျနိုငျ, နှစ်ယောက်အဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင် Boot တက်စခန်းဖန်တီး. ဒါဟာသင်အကြားကျန်းမာသန်ယှဉ်ပြိုင်လာအောင်နှိုးဆွဖို့အစုံလင်သောလမ်းဖွင့်.
ဒေသခံတစ်ဦးဂိမ်းကိုသွားပါ – အတူတူ. ကိုက်ညီတဲ့မြှုပ်လက်ချောင်းနှင့်သင်၏အသင်းအပေါ်ရူ့. လူအစုအဝေး၏လေထု၌ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆုံးရှုံး – ချီလွှဲလုပ်နေစဉ်ကပျော်စရာရှိသည်ဖို့မခဲယဉ်းင်! သငျသညျသတ္တိ feeling နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအစဉ်မပြတ် Jumbotron အပေါ်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာသတင်းစကားကိုကြိုးစားရနိုင်.
4. နှစ်ယောက် Campout
သူတို့အားနွေရာသီညနေခင်း၏ဆုံး Make. တစ်ဦးစျေးပေါရှိပါတယ်, ပျော်စရာ (နှင့်လုံးဝရင်ခုန်စရာ) သင့်ရဲ့အိမ်နောက်ဖေး၌တရားစောင့်ဆိုင်းနေသည့်ရက်စွဲ. တဲကိုတက် Set, နှင့်တစ်ဦးမိုဃ်းနွေရာသီမိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌တစ်ဦးရင်ခုန်စရာနေ့စွဲညဉျ့အခါ snuggling ပျော်မွေ့!
ထိုတိရိစ္ဆာန်ရုံမှတစ်ဦးကခရီးစဉ်ကိုဒီဖန်တီးမှုနေ့စွဲစိတ်ကူးဖြင့်သင်တို့အတွက်ဆိတ်သငယ်ကိုထုတ်ဆောင် ခဲ့. ဖို့သေချာပါသည်! ဤမျှလောက်များစွာသောတိရစ္ဆာန်တွေကိုကြည့်ဖို့နှင့်အတူ, သငျသညျမဆိုအဆင်မပြေငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်နှုတ်ဆက်ချီလွှဲနိုင်. အပေါ်သွားလော့, သင်ဘယ်လောက်သူတို့ကိုအကြောင်း Wild သင်၏ရက်စွဲကိုပြသ!
6. Berry ဟာကောက်နေ
နွေရာသီပြင်ပမှာ get နဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးကောက်ရန်စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့လည်းတော်တော်ပျော်စရာနဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့စွဲစိတ်ကူးစေသည်. ထိုအခါမွှေးအချိုပွဲအားရစရာသို့သူတို့အားသီးဖွင့်ဖို့နောက်အိမ်ပြန်လာ.